Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Seychelles Tourism Board sy Edelweiss Air: fitambarana fandresena
Ny biraon'ny Seychelles Tourism Board (STB) any Frankfurt dia niara-niasa tamin'i Edelweiss Air hanentanana ny fahatongavan'ireo masoivoho mpivahiny any Suisse. Izany dia mialoha ny sidina mivantana ho avy ataon'ny zotram-piaramanidina Suisse, mampifandray an'i Zurich mankany Seychelles, hatramin'ny volana septambra 2018. Nisy atrikasa an-tanàna roa izay nokarakarain'ny STB sy Edelweiss Air, tao Zurich sy Lucerne. Natomboka tao Zurich ny atrikasa izay nandehanan'ireo mpiasan'ny dia 60 nanao dia an-tsambo teny amin'ny Lake Zurich tao anaty sambo MS Uetliberg.
Tao Lucerne, mpitsangatsangana manodidina ny 35 no nitsidika ny Heini Garten, toeram-pivoriana malaza iray natao tao amin'ny trano fandraisam-bahiny misy zavamaniry mahafinaritra, ao anatin'izany ny hazo palma sy zavamaniry hafakely. Ny talen'ny birao fizahan-tany any Seychelles ho an'i Alemana, Austria ary Suisse, Edith Hunzinger, dia nanolotra famelabelaran-kevitra. Ireo masoivohon'ny dia dia nanararaotra nihaona tamin'ny mpiara-miombon'antoka fito ihany koa, misolo tena ny trano fonenana isan-karazany ao Seychelles, dia ny Acajou Beach Resort, Coco de Mer Hotel ary Black Parrot Suites, Constance Hotels and Resorts, Hilton Hotels and Resorts, Kempinski Seychelles Resort, ary Raffles Praslin Seychelles. Io dia nahafahan'izy ireo nanangona vaovao momba ireo trano fonenana ireo sy ireo vokatra natolony.
Ramatoa Hunzinger koa dia nanao famelabelarana fohy momba ny Edelweiss Air, manome antsipiriany momba ny serivisy tsy miato ho an'i Seychelles. Tao amin'ireo tanàna roa ireo, dia nanomboka nahita ny nahandro Creole ny agents, izay nanjary nanandrana curry voanio, baolina tuna ary salady mangahazo izay namboarin-dRtoa Hunzinger daholo. Nilaza ny talen'ny STB fa afa-po tanteraka amin'ny fatran'ny fandraisana anjara amin'ilay atrikasa misy tanàna roa izy. Naneho ny fahafaham-pony tamin'ny zava-bitan'ny firenena Alpine amin'ny ankapobeny ihany koa izy, izay nanatri-maso hatrany ny fitomboan'ny isan'ny mpitsidika tonga tany Seychelles isan-taona. “Matoky tanteraka ny tsenan'i Soisa izahay, ary ny fandraisana anjaranay tsara tamin'ny atrikasa roa nataonay dia nanaporofo ny fahalianana tsy azo hozongozonina sy ny fanohanan'ny orinasam-pitaterana Soisa. Tian'ny Swiss ny Seychelles, ary Switzerland dia hitohy ho firenena loharano azo antoka amintsika mandritra ny taona maro ho avy, "hoy Ramatoa Hunzinger.
Na dia miaina ny fihenan'ny isan'ny mpitsidika tonga any Seychelles aza i Soisa hatreto amin'ny 2018 raha oharina amin'ny 2017, antenaina fa ny fampidirana sidina mivantana dia hanampy amin'ny fampiroboroboana ny mombamomba an'i Seychelles ho fialantsasatra fialantsasatra eo amin'ireo mpizahatany Soisa.